yazvino iphone 6s skrini inodzivirira inogona kusakwana pa iphone 7
Kuru Nhau & Ongororo Parizvino iPhone 6s vadziviriri vechidzitiro vanogona kusakwana paiyo iPhone 7
Parizvino iPhone 6s vadziviriri vechidzitiro vanogona kusakwana paiyo iPhone 7
Sezvawakanzwa Apple ichizivisa pachikuva svondo rapfuura, uye sezvaungaona mune yayo iPhone 7 dhizaini pano, nhare nyowani dzinobva kuCupertino izvozvi dzinotakura nevatauri ve stereo. Nepo izwi rekuti & apos; stereo 'rinoshandiswa pamidziyo midiki yakadaro ringaitwe nharo, kunyatso kugadziridzwa kwevatauri vatsva kunoita kuti inzwi riuye kubva kune vazhinji vavo, pane kuti mutauri mumwechete akafanana neese maPhones pamberi pegore rino & apos.
Musiyano unooneka, zvisinei, ndewekuti Apple inoshandisa izwi rekuti & apos; stereo speaker, 'kana ichinongedzera kune chekutanga munzeve, asi & maapos; maspika stereo muuzhinji apo dhayagiramu inoratidza yepasi, saka panogona kunge paine kurira blasters pazasi, uye imwe kumusoro. Iyo yepamusoro imwe zvakare inoshandiswa seyekuteerera kana iwe uchitaura, senge pane akawanda ma stereo masipika-akashongedzerwa mafoni kunze uko.
Uye pano isu tinosvika pachikamu chinonakidza. Kuti ugadzire kurira kwakanyanya nenzvimbo iripo, Apple inoita kunge isingaite sekunge yakaisa mutauri wakapamhamha pazasi, asi zvakare yakaregedza chakadimburwa nzeve uye inodzivirira mesh combo kumusoro. Iyo & apos; haina kukura nemahombekombe akakura, asi inoita kunge yakakura zvakakwana kupfuura chiyeuchidzo pane iyo iPhone 6 / 6s kupa chigadziro chitsva chevadziviriri vechidzitiro.
Yep, yakareba nyaya ipfupi, isu & apos; tichave tichiita kutenderera kweakanakisa iPhone 7 uye 7 Plus vadziviriri vechidzitiro nekukurumidza apo mhando dzakarova pamusika mumapoka, sezvo zvinoita sekunge vagadziri vezvishongedzo vachatofanira kudzokera kubhodhi rekudhirowa iwo magirazi kana epurasitiki mafirimu iwe & apos; d yaunoda kuisa pamusoro peyako iPhone 7 skrini kudzivirira kukwenya kana kutsemuka kubva kuonekwe ipapo.
Apple iPhone 7 Uyezve
158.2 X 77,9 X 7.3 mm
Apple iPhone 6s Uyezve
Enzanisa idzi nedzimwe foni tichishandisa yedu Yekuenzanisa Kuenzanisa chishandiso.
chinyoreso 4 vs chinyoreso 5
Java tora ikozvino dhairekitori rinoshanda
nyowani nyowani mbozhanhare dzinobuda
Yakanakisa bhajeti uye mafoni anodhura muna 2021: mutengi & apos; s gwara
Akanakisa mascreen ekudzivirira eGoogle Pixel uye Pixel XL
iOS 14 vs Android 11: 2020 & apos; s software inodiwa
T-Mobile inowedzera 2GB Zvirongwa Zvisarudzo Zvisina Kufanira kuBinge On, asi nenzira inotsausa (UPDATE)
Samsung Galaxy Tab S7 inowana rakakura $ 200 dhisikaundi kuAmazon
AT & T inodonhedza mafoni ako? Izvi zvinogona kubatsira
Iyo Inobudirira Simba bhagi muIOS yakatsanangurwa, kana nei meseji isingazivikanwe inogona kunge ichikonzera iPhones kupunzika
Yakanakisa Apple iPad 8 skrini inodzivirira